Android အတွက် Dragon Project - ဤမဟာဗျူဟာဂိမ်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Androidsis
La Android အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ဂိမ်းအမျိုးအစားများ ပစ္စုပ္ပန်မှာအရှိဆုံးကျယ်ပြန့်သည်။ သို့သော်ယခုအခါအားလျော်စွာဂိမ်းတစ်ခုသည်ပေါ်ထွက်လာပြီးကျန်အရာများအပေါ်မူတည်သည်။ ဒါကဘာလဲ နဂါးစီမံကိန်းနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ un မဟာဗျူဟာဂိမ်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာ၏စွဲလမ်းမှုဖြစ်လာရန်ကတိပေးသည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် multiplayer မဟာဗျူဟာဂိမ်း, ဒါကြောင့်မင်းတို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ ယင်း၏ပစ်လွှတ်ကတည်းကဂိမ်းတစ်ခု အလွန်အပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုကဒီ Dragon Project ကိုအလားအလာအကောင်းဆုံးနှင့်၎င်း၏အမျိုးအစား၏ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။
El ဂိမ်း၏ကြံစည်မှုကျွန်တော်တို့ကိုချိတ်ရန်စီမံခန့်ခွဲ ပထမ ငါတို့ပြောင်းလိုက်တယ် Heiland လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံ။ မကြာသေးမီအချိန်အထိငြိမ်းချမ်းရေးသည်စိုးစံခဲ့ပြီးပြည်သူလူထုသည်လုံခြုံမှုရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံတော်ကိုဘေးကင်းစွာပြောင်းရွှေ့နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီအရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာ နဂါးများနှင့်အခြားသတ္တဝါများပေါ်လာသည်။ သူတို့ကစမယ် ဖျက်ဆီးဖျက်ဆီး ယင်း၏ပါတီအား၌။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာထိုသတ္တဝါများကိုလိုက်ရှာသည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ဦး ဆောင်ရန်ဖြစ်သည် နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်မှုကိုပြန်လည်ရယူပါ.
ထို့ကြောင့်, အစအ ဦး မှာနဂါးစီမံကိန်း၏ရဝုဏ်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ ငါတို့ ဤနဂါးများဖြင့်အဆုံးသတ်မည့်ဤအသင်းကိုဖွဲ့စည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများကိုစုစည်းနိုင်သည် သူတို့သည်ငါတို့နိုင်ငံတွင်ဤမျှလောက်များပြားသောပျက်စီးမှုများကိုဖြစ်စေသည်။ ဂိမ်း၏စစ်ဆင်ရေးမဟာဗျူဟာအမျိုးအစား၏ဂန္ဒြပ်စင်ရှိပါတယ်။
ငါတို့လုပ်ရလိမ့်မယ် မစ်ရှင်လုပ်ဆောင်။ ဒီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပူးပေါင်းသူများကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ ရန်သူတွေကိုအနိုင်ယူလိုက်ရင်ငါတို့သွားမယ် ပစ္စည်းနှင့်အဆင့်မြှင့်လာပြီ ကျွန်တော်တို့ကိုဂိမ်းထဲမှာတိုးတက်လာဖို့ခွင့်ပြုပါ။ ကျနော်တို့ရရှိနိုင်ပါသည်သောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် အများကြီးပိုအစွမ်းထက်လက်နက်များနှင့်စာလုံးပေါင်းရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်တိုင်းပိုပြီးစွမ်းအားကြီးမားတဲ့သတ္တဝါတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်အဖြစ်အခက်အခဲကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးအတွက် Dragon Project ဂရပ်ဖစ်ကဲ့သို့သောနည်းဗျူဟာဂိမ်းသည်အဓိကကျသောအချက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဇာတ်လမ်းထဲကို ၀ င်ပြီးအတွေ့အကြုံကိုပိုပြီးအားကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဂိမ်းကဖြစ်သင့်သောအရာကိုမဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကံကောင်းတာက၊ ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့မှာဂရပ်ဖစ်တော်တော်များများရှိတယ်။ အချို့ 3D ပုံရိပ်သည်ဇာတ်လမ်းကိုပြင်းထန်စွာပေးသည်။ အထူးသဖြင့်ဒီဆိုးညစ်တဲ့သတ္တဝါတွေနဲ့ငါတို့တိုက်နေရချိန်မှာထူးခြားတယ်။
ခြော, ကျွန်တော်တို့ကို Heiland သို့သယ်ဆောင်ရန်ကူညီပါ ငါတို့ဇာတ်လမ်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းလို့ခံစားရတယ်။ The ဇာတ်ကောင်များ၏အဝတ်အစားများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှလက်နက်များနှင့်စာလုံးပေါင်းများပိုမိုရရှိနိုင်ပါသည်။ နဂါးများနှင့်အခြားသတ္တဝါများကိုလည်းအသေးစိတ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။ ဒါကြောင့်သောလမ်း ပုံပြင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးသောစိတ်ကူးစိတ်သန်းများပြည့်နှက်နေသောဤကမ္ဘာတွင်ကြီးထွားလာသည်။ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာသူတို့ဟာကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဒီအမျိုးအစားအမျိုးအစားရဲ့အဓိကကျတဲ့အရာကကစားဖို့အရမ်းမခက်ဘူး။ ကံကောင်းချင်တော့နဂါးစီမံကိန်းသည်ဤကိစ်စနှင့် ပတ်သက်၍ အပြည့်အဝလိုက်နာသည်။ အဆိုပါဂိမ်းအလွန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အလိုလိုသိသည်။ တစ်ယောက်တည်း ကစားဖို့လက်ချောင်းလိုတယ် ဒီဂိမ်းအတွက်မပြproblemနာမရှိပါ။ ဂိမ်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကို (ဇာတ်ကောင်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ခုခံကာကွယ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း) ကိုလက်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
သောကြောင့် Dragon Project ကိုကစားနိုင်ဖို့အရမ်းလွယ်တယ်။ ခြောဂိမ်း၏လူကြိုက်များအထောက်အကူပြုကြောင်းရှုထောင့်။ မည်သူမဆိုလုပ်နိုင်ကတည်းက သင်၏ဇာတ်ကောင်ကိုလွယ်ကူစွာထိန်းချုပ်ပါ.
La Google Project တွင် Dragon Project ကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကိရိယာတွင်ဂိမ်းကိုထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘာမှမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးရမည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာဂိမ်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် Android 4.1 ရှိရင်။ သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားသောဗားရှင်း installedသို့ဖြစ်လျှင်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပြnoနာမရှိပါ။ ပြproblemsနာမရှိဘဲတပ်ဆင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဘာပဲ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါကဂိမ်းတွင် ၀ ယ်ယူမှုများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောအရာဝတ္ထုများ၏ဘက်ပေါင်းစုံ ၀ ယ်ယူမှုများကိုရှာဖွေသည်။ ၎င်းသည်မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမဟုတ်သော်လည်း၎င်းဂိမ်းတွင်ပိုမိုလျင်မြန်စွာတိုးတက်လာရန်ကူညီသည်။ The ဝယ်ယူမှုသည်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်ယူရို ၁.၀၉ မှ ၁၁၄.၉၉ အထိရှိသည်။ Dragon Project မှဤပစ္စည်းများ၏ဈေးနှုန်းအချို့သည်အလွန်မြင့်မားသော်လည်းကံကောင်းချင်တော့၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒါကြောင့်သင်ကယူရိုမဖြုန်းဘဲဂိမ်းကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။
Dragon Project သည်နည်းဗျူဟာဂိမ်းများကိုနှစ်သက်သူများအတွက်စံပြဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကစားသမားကိုချိတ်ရန်စီမံထားသောအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်း။ ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်နှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုသင်၏သူငယ်ချင်းများ၊ လူများနှင့်ကစားနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းသည်၎င်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ သူသိထားသည်မှာသေချာသည် အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာဂိမ်းများကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့် Android ထုတ်ကုန်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်.
Un goGame အားဖြင့်ပြုသောအလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်။ ဒီဆောင်း ဦး ရာသီရဲ့အထင်ရှားဆုံး Android ဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဒီဂိမ်းနဲ့တွေ့နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာကအဲဒါပဲ မြင့်မားသောဘက်ထရီသုံးစွဲမှုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ခဏကြာရင်မင်းရဲ့ဘက်ထရီကဘယ်လောက်ကုန်သွားသလဲဆိုတာသတိပြုမိလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်မဟာဗျူဟာဂိမ်းများကိုနှစ်သက်လျှင်၊ မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့် သင်၏ Project မှ Dragon Project ကို download လုပ်ပါ။ သင်နောင်တမရပါ သင်၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်၏ download link ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ထားရှိပါသည်။
သုံးသပ်ချက် - အက်ဒါဖာရီနို
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » Android အတွက် Dragon Project - ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Android တွင်မိုဘိုင်းဒေတာသုံးစွဲမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အလွန်ကောင်းသော app တစ်ခု